Xaaladdii u Dambeysay ee Dagaalka Gaalkacyo
Gaalkacyo: Qalliinka dhinaca indhaha
Xaaladda magaalada Gaalkacayo ee badhtamaha Soomaaliya ayaa degganayd maanta kaidb dagaalladii shalay halkaais ka dhacay oo ay ku dhintene ugu yaraan 7 qof, in ka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada waxa aku suganw afdi ka socda dawladda federaalka oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arirmaha Gudaha iyo Federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa.
Waxaa isa soo taraya baaqyada la jeedinayo ee lagu doonayo in dhinayada iskaga soo horjeeda magaalada ay nabad qaataan. Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaallada ka socda magaalada Gaalkacayo ee gobolka Mudug, waxaanay dhinacyada halkaasi ku dagaallamaya ugu baaqday inay nabad iyo wadahadal ku dhammeeyaan wixii u dhaxeeya.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan gayiga geeska Afrika ay nabad ahaato.
Dhinaca kalena Sheekh Maxamed Iddiris Axmed oo ka mid ah culimada ugu magaca dheer Soomaalida ayaa isna saaray baaq uu ugu jeedinayo dadka dagaalamaya inay inay xabbadda joojiyaan, waxaana uu sheegay inuusan dagaalkaasi ahayn mid bannaan dhinaca shareecada.
Haddaba guud ahaa warbixinadaasi ka dhageyso sanduuqa madow ee hoose.
WARARKII U DAMBEEYAY GAALKACYO